Ahoana ny fomba hitsaboana coronavirus canine | Tontolo alika
Ny iray amin'ireo aretina mety hitranga amin'ny alika dia ny coronavirus amin'ny alika, izay pathogen virus izay mora miparitaka eo anelanelan'ny alika. Na dia tsy matotra aza izany dia mitaky fikolokoloana biby mba hahafahan'ny volo hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna.
Noho izany, hanazava isika ny fomba hitsaboana coronavirus canine. Amin'izay dia ho fantatrao izay hatao raha miahiahy ianao fa manana izany ny namanao.
1 Inona no atao hoe coronavirus?
2 Ahoana no itsaboana azy?
Canine coronavirus dia aretina iray mitovy amin'ny hatsiaka mahazatra amin'ny olombelona. na dia mifindra amin'ny alàlan'ny viriosy izay mamokatra andianà soritr'aretina manahirana nefa tsy matotra tsy maintsy mandalo fotsiny izany. Tsy misy fanasitranana, fa tsara ny vinavina.
Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny vatan'ny alika ny viriosy, dia hanomboka hiseho ny soritr'aretina eo anelanelan'ny 24 sy 36 ora, izay toy izao manaraka izao: tazo, mangovitra, mandoa, tsy ampy rano, fivalanana tampoka, maimbo (indraindray misy ra sy / na moka) ary fanaintainan'ny vavony. Raha mampiseho famantarana aretina iray na maromaro ny namantsika dia tsy maintsy entintsika any amin'ny mpitsabo vetivety haingana araka izay tratra izy.
Miankina amin'ny tranga tsirairay, ny mpitsabo biby dia afaka mitsabo azy ireo amin'ny fomba tokana na mitambatra fitsaboana maro, na amin'ny antiviral, antibiotika, ary miaraka tsiranoka raha tsy ampy rano izy ireo. Toy izany koa, raha manana aretim-pivalanana na gastrointestinal izy ireo dia homeko fanafody prokinetic izay hanampy azy ireo hanatsara ny fahasalaman'ny rafi-pandevonan-kanina.
Na izany aza, zava-dehibe ny fahalalana izany ny fitsaboana tsara indrindra dia ny fisorohana hatrany. Noho io antony io dia tena ilaina ny mitondra azy ireo hanana ny vaksiny ilaina mba hananan'izy ireo fiarovana tsara afaka miatrika ny virus. Ho fanampin'izany, ny sakafo faran'izay tsara sy ny fahadiovana araka ny tokony ho izy dia ho tena zava-dehibe ihany koa mba tsy hanahirana ny volo intsony ny volo.
Amin'ireto torohevitra ireto dia afaka hanana fiainana ara-dalàna ny kely kokoa noho ny eritreretintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ahoana no hitsaboana coronavirus canine
Ahoana no tokony hataontsika rehefa mandositra ny alikantsika
Inona no ao ambadiky ny fijerin'ny alika meloka?